अध्यक्ष थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज – Makalukhabar.com
मकालु खबर	 २०७७ कार्तिक ९ गते प्रकाशित 63
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा। फाइल फोटो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा आज चाबहिलस्थित ॐ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि गत असोज ३० गते अस्पताल भर्ना भएका थापाको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएपछि उनी आज घर फर्किएका हुन् ।
थापाको उपचारमा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर तथा सिनियर कन्सल्टयान्ट फिजिसियन डा. विश्वनाथ कोइराला, सिनियर कनसल्टयान्ट पन्मनोलोजिष्ट डा सुबोध ढकाल, कन्सल्टयान्ट इन्टेन्सिभिष्ट डा. प्रमेशसुन्दर श्रेष्ठ, डा विपीन कार्कीलगायतको टोली संलग्न थियो ।